4 Talooyin kaa caawinaya in aad u maareeyaan waqtiga si caqli ah | USAHello | USAHello
By M'Munga Songolo October 28-, 2017 Nolol maalmeed, Voices
4 Talooyin kaa caawinaya in aad u maareeyaan waqtiga si caqli ah | USAHello
Maareynta waqtiga Mar walba ma fududa. Sidee baad u maareeyaan waqtiga? halkan waxaa ku qoran 4 Talooyin kaa caawinaya in aad u maareeyaan waqtiga si caqli ah.
Dad badan ayaa soo food leh su'aashan oo aanad garanayn sida in ay ka jawaabaan, qiimaynta wakhtiga la ma ahan oo keliya la siinayo faahfaahin dheeraad ah aad maqaalka, ama shaqada guriga, qiimaynta wakhtiga la faqri saacad kasta oo aad maalin wax faa'iido leh samaynaya.
Sida loo qiimeeyo waqtiga aad
Qiimaynta waqti la siiyo dadaalka dheeraadka ah ee aad maalin kasta, hawlo waxtar leh. Qiimaynta waqti la siiyo oo aad ugu wanaagsan wax kasta oo aad samayn. Waa maxay qiyamka aan nolosha? Waxaa laga yaabaa inaad weydiiso. Waxaan u furan tahay in uu noqdo ciyaaryahan kubadda kolayga xirfadeed iyo qareenka socdaalka, si aan waqti in ay ku dhaqmaan ciyaarta kubbadda kolayga siin, barbarta gacanka, toogashada, difaaca, iyo wax ka badan. Intaa waxaa dheer, sidoo kale qiimaha aan qoyska, aan asalkoodu ajinebiga, iyo saaxiibada.
Hagaajinta xiriirka aad
Kuwan oo dhan ayaan waqti hagaajinta aan xiriirka iyo aqoonta sii aan sirdoonka iyo qiimaynta aan waqti ka sii. Waayo, kuwa halgan laga yaabaa in la maareeyo, wakhtigooda ama aadan aqoon sida loo qiimeeyo waqtigooda, halkan jira xoogaa tallaabooyin ah si ay kaaga caawiso qiimeeyaan waqti hab kaas oo ah wax soo saar leh oo kaa caawin kara inaad u koraan.
Waxaan kugula talineynaa in aad marka hore:
Samee jadwal maalinle ah oo wixii aad samayn doonto maalin kasta oo
Qor gool waayo, maalintii oo dib ugu iyaga dhamaadka maalinta oo arag oo gool aad dhammaysid.
Dhegayso video ah mintidnimada bilowga ah ee aad maalin(oo aad qaadi karto qoraal!). Tani waxay ka heli doontaa inaad dhiirigeliya oo kaa caawinaya in aad bilowdid maalinta.
Ugu dambayn, ku celi hannaanka!
Continue sidan samayso ilaa jadwalka waxaa taaban in maankiinna, sida aad u qaadan doonaan in ka badan maalin iyo bilaabi gacanta ku noloshaada maalin kasta oo. Sida aad marnaba yeelan doonaan maalin oo fasax ah, sida aad had iyo jeer u hayn doonaa hagaajinta xiriirka aad, aad gool, iyo himilooyinka.
About M'Munga Songolo